Waa maxay ka hortagga uurka? | Zanzu
Ka hortagga uurka waxa uu ka hortaggaa haweenku inay uuraystaan.
Adiga iyo lamaanahaaga waxaad go'aan ka gaadhi doontaa haddii aad doonayso inaad carruur dhasho, marka aad doonayso inaad dhasho iyo imisa carruur ah oo aad doonayso inaad dhasho. Tan waxaa loogu yeedhaa qorshaynta qoyska. mamrkaad doonayso inaad samayso galmo, laakiin aad doonayso inaadan ilmo dhalin (weli) waxaad iskaga ilaalin kartaa uurka isticmaalka ka hortagga uurka.
Ka hortagga uurku kama dhigo haweenayda mid aan rimayn. Marka ay joojiso isticmaalka ka hortagga uurka, carruur way dhali kartaa.
Kondhomku waa qaabka ka hortagga uurka kaas oo sidoo kale kaa ilaaliya adiga HIV oo yareeya khatarta qaadista STI.
Qaababka kala duwan ee ka hortagga uurka
Waxaa jira qaabab kala duwan oo ka hortagga uurka ah. Waxaad dooran kartaa qaabka kugu habboon adiga iyo lamaanahaaga. Qaabab aad ayay u kala duwan yihiin, tusaale ahaan:
qaabka loo isticmaalo.
Ka hortagga uurku uma xumaba qof caafimaadkiis. Qaababka ka hortagga uurku waxay ku habboon yihiin qaab nololeedka qofka gaarka ah, da'da iyo xaalada jidhka si ka wanaagsan kuwa kale.
Ka hortagga uurku waxa uu u shaqeeyaa si wanaagsan haddii aad si sax ah u isticmaasho. Sababtana, waa muhiim in la doorto qaabka kugu habboon adiga. Haddii aanu qaabku kugu habboonayn adiga, waxaad isku deyi kartaa qaab kale oo ka hortagga uurka ah.
Waydii xirfad yaqaanka caafimaadka wixii talo ah. Xirfad yaqaanka caafimaadka uma gudbin karo macluumaadkayga wax ku saabsan adiga qof kasta oo kale. Isaga/ iyadda waxaa sharcigu ku waajibayay inay tixgeliyaan gaar ahaanshahaaga. Waxaad sidoo kale kala hadli kartaa kahortagga uurka lamaanahaaga.
Soo iibsiga ka hortagga uurka
Waxaad iibsan kartaa kondhomka labadana iyo kondhomada dhediga iyaddoon laguu qorin xaga faramiisga, farmasiiladaha ama subermaarkadka. Waxaad sidoo kale ka iibsan kartaa internadka, tusaale https://www.condoomsenzo.nl/.
Gudaha Netherlands, waxaad sidoo kale ka iibsan kartaa ka hortagga uurka degdega ah (subaxda kiniinka ka dambeeya) iyaddoon la qorin xaga farmasiiga ama farmasiilaha. Waxaad kartaa inaad iibsato badanka ka hortagga uurka xaga farmasiiga, iyaddoonu qorin dhakhtar.
Mowduuyo badan oo la xidhiidha Waa maxay ka hortagga uurka?
Qorshaynta qoyska iyo ka hortagga uurka